रामेछापको ८ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ४१ करोड बजेट, कहाँ कति ? विवरण सहित « Ramechhap News
रामेछापको ८ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ४१ करोड बजेट, कहाँ कति ? विवरण सहित
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि रामेछापको ८ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको संरचना अनुसार सबै भन्दा बढी मन्थली नगरपालिकामा ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र सबै भन्दा कम सुनापति गाउँपालिकामा २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको छ ।
बिनियोजित बजेट अनुसार मन्थली नगरपालिकामा ४९ करोड ५५ लाख २९ हजार र रामेछाप नगरपालिकामा ३४ करोड ३३ लाख ३७ हजार रुपैया छुटयाइएको छ । त्यसैगरी उमाकुण्ड गाउँपालिकामा २४ करोड ४० लाख ३० हजार, खाँडादेवी गाउँपालिकामा ३२ करोड ३२ लाख ५ हजार, गोकुलगंगा गाउँपालिकामा २४ करोड २२ लाख ७८ हजार, दोरम्बा गाउँपालिकामा २६ करोड ९ लाख ४ हजार, लिखु गाउँपालिकामा २७ करोड ६३ लाख ७२ हजार र सुनापति गाउँपालिमा २२ करोड ८१ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।